Ekupheleni kwenyanga, emva kwexesha pa zegumbi lo msebenzi (sokubuyisa ixesha ekuphulukenwe okanye open-life)
※ nje ekuphelenipa parlour Nceda ujonge ngokuba intsingiselo for lonke ushishino, ndicinga ukuba abanye abantu Kudala ndive intlebendwane abangekhe ngaphandle. Enyanisweni, injalo loo nto. Isiphelo pa...
Ezilungileyo nezingalunganga, leyo ezijolise Xintai in nesendlu pa
Kulo lokuphumula pa, njl phambi kwesikhululo, unako kwakhona ukudlala kuqaliswa zikhutshwa ngokukhawuleza emva kokuba Xintai. In, izinto ezingalunganga ejolise ezinjenge Xintai, siza kujonga ukuba yin...
Features - ukubona indlela Horukon nini eliphakathi
E Horukon capture, kuye ukuba abe nako ukuseta ibhola kunye Horukon. Phakathi kwabo, ufakelo phezulu, isicwangciso esiphakathi, kukuba ephantsi iseti kunye neendidi ezintathu abakhoyo. Ngo, kwiseti em...
Features - ukubona indlela njengamaza ROM idla ubomi
Pa umatshini we-ROM kukuba, ixesha namandla, ngokuqhelekileyo xesha, yahlulelwe kwii ixesha ukuwa. Xa kuthelekiswa isizini eyomeleleyo kunye nexesha enomsindo, ukuze ubomi yesiqhelo ye xelela nzima. i...
Kwi pa parlour, ngaba ucinga ukuba neqonga akuzi kakhulu. Kungenjalo, kuba bekuya kuba yinto akuthethi kuthi intengiso of pa parlour. Ngo, njengoko amanyathelo ezingaqhelekanga kakhulu, nesendlu pa ez...
umatshini pa jackpot ahlulwa kuzo zonke kulawulo ROM. Ukuba Minukere Isigaba elinqatyisiweyo ROM, kungona kungenzeka ukuba givin lo jackpot. Ngoko ke, nokuba kukho inkalo kwisigaba kakuhle ye-ROM, yay...
Hanemono Kulungile theory umda?
Kwiminyaka yakutshanje, kuba ikhutshwe lowu abaninzi pa, inkcazelo iye yaba lula ukuba ufake isandla. Ngoko ke, ukuba umntu wabetha pa, kanye, mna think're nomdla Ngokuba wabona bathi ithiyori umda.Ap...
Kwi computer, kunye iseti yokuthengisa, nguye lo capture eholweni conserver na ukwazi oko ukulawula imali. Njengoko kwisigaba ukuba amisele ipesenti inkokhelo, phezulu-amisiweyo, isicwangciso ephakath...
Horukon high-phawu-ukubona indlela yokubeka
E Horukon capture, oko kuthiwa ziye zabekelwa hlula. shop pa, ukuba Uchikome kwiintengiso target Horukon, kwaye ngokukhululekileyo ukubala izinga unciphiso, wathi ukuba ukulawula intlawulo.Ulawulo olu...
E Horukon capture, oko kuthiwa ukuba zihanjiswe jackpot ngamaqela umatshini pa kwi transformer. Ngoko ke, kuthiwa olusebenzayo Horukon capture, ndifuna ukubona ukuba uhlobo izinto ubudlelwane phakathi...
Ukuba awuyazi kakuhle, elibe pa kule Horukon kukuba, kubonakala ekucingelwa abanye abantu ukuba babe mthethweni, ezifana kude, neloqobo ayikho nomatshini into enjalo. I Horukon, nguye segama khuba com...
■ Yiyiphi na ekuqaleni ukuyaemva kokuba zonke pa parlour yolawulo, kunye nokuncipha ibhola ngaphandle ukusuka kwiintengiso, kuba kutheni na iimfuno nkampani kuthatyathwe iindleko ezahlukeneyo.Ngamanye...
Iinkcukacha eziqokelelwe ukudala uthungelwano nakunxibelelwano kubathengi, Pachipuro ngo nesendlu pa
Ndicinga ukuba kukho abathengi abakubonayo lonke ixesha usiya elibe fans. Ngabathengi ziyolala yonke Shigeku unyawo imihla ngaphezu msebenzi, obizwa ngokuba kubathengi kushishino pa. Kwaye, nangona nd...
Imifuziselo pa lokukhetha isimbo ekulweni specs
Lo matshini pa, kukho into ekuthiwa zezirhubuluzi. Spec kwaye ixabiso lenani emele amathuba okuba le jackpot. Pa kweenkcukacha, uya ihlelwa iintlobo ezintathu eziphambili. Kwi uhlobo jackpot amathuba ...
Ke zone eshushu okanye ixesha indlela ixesha elingakanani na, ukuze aviwe kakuhle. izowuni yexesha ashinyeneyo, kuxhomekeke kwimeko pa nakwesiphi na indawo kunye nobume kunye neentengiso zokusebenza, ...
Wonke evela nesendlu pa, ulwazi ishishini zeziganeko kunye mini, ndicinga ukuba abanye abantu baye ngeposi. Ngokuba yonke imihla ukufikelela nantoni emails, ndikhe ndeva ukuba abantu abaninzi ezingekh...
Yakutshanje pa parlour, a screen enkulu kumatshini ebizwa ngokuba data Lobo, iivenkile ukuba zifakelwe sele baba baninzi. Le venkile bomnyango ngaphambili kunye counter phambi, njl, kulo matshini sele...
※ ukuba lahlala intsingiselo yeshishini yonke abopa Favorite Nceda ujonge na, ukuze sibe abantu obaziyo, ukukhuphisana, elibe pa na phakathi enyangeni kuyacetyiswa kakhulu . Kwi pa lokuphumula, kodwa ...
Isigaba recovery ngokubanzi, nesendlu pa, osemqoka-ukubona indlela
※ kwakhona lastpa parlour Nceda thelekisa ku njengoko isimo lonke ushishino kuba nkampani yorhwebo kufuneka abe nenzuzo yonke imihla. Ukuba ucinga njalo, kodwa le nguqulelo nako ukujonga ukuba sokubuy...
Ngomhla wokuqala imini replacement Xintai, ukuze idatha nayo hayi, kuba urhulumente ulwazi akukho, ukuba Neraiuchi ukukhetha iqonga yinto enzima. Xintai ngosuku lokuqala, oko akuthethi ukuba vula kusa...
Kwiminyaka yakutshanje, siye inani elandayo, nesendlu pa ukufaka ikona ezahlukeneyo. icala Ngokuqhelekileyo, siye saseka ngasecaleni a iiyunithi ezimbalwa le modeli, kwi Ezahlukeneyo yembombo, nayo iy...
Kwitheyibhile isehlakalo, kuyinyaniso ukuba nkqu nesendlu pa ekucingelwa ukuba sinokunikezela kunesiqhelo. Noko ke, oko kuthetha ukuba yonke iqonga hlengahlengiso ayikho kakade. In, ngexesha lomsitho,...
imifuziselo lophawu, ndifuna ukudlala abathengi abaninzi kule pa parlour, 's imveliso iyavela. imifuziselo lophawu, kodwa ezahlukeneyo kwivenkile nganye, thina sidla kukho imifuziselo ezininzi kuthoth...
Nkqu pa parlour ukuba aye kuni, ndicinga ukuba kusoloko kungekho ngumzekelo omhle kakhulu ezincinane yokusebenza. Ngokukodwa, okanye baye babekwa malunga zevenkile ngasemva, inani onobuhle ambalwa kak...
Wonke umntu, kuthethwa ukukhetha iivenkile pa, umoya kunye nenkonzo yokudlala kunye iivenkile, njl, ndicinga ukuba ezahlukahlukeneyo, kodwa imo yokusebenza ukuba ufuna ukuzuza imali iya kuba ingongoma...
Izinto eziluncedo nezingeloncedo ukhethe izinga ukusetyenziswa eliphantsi pa parlour
Lo mzuzu ndivula ucango pa parlour, zizele itafile engenanto, ube Urhashaza phezu likarhulumente, yaye oku shop'll ugcine stop, ndicinga ukuba kukho abaninzi aziboni kwizikrelemnqa. Likhangeleka stree...
Xa usiya fans neslothi, ndicinga kuqala ukuba umlinganiselo ukuguquka nexhala. Kuxhaphakile elibe pa, isixa kwebhola xa bayababoleka kubathengi, omnye ka-4 yen, iye yaba enye imbasa 20 yen. Kwiminyaka...
※ lokugqibela Nceda thelekisa ku njengoko mkhuba of the shishino yonkepa wenziwe enye umdlalo abathengi kunye iivenkile ukuba wina okanye ulahlekelwe. Noko ke, ukuba njalo kuwo, ngenxa yokuba abatheng...
Kanye phezu ixesha elibe pa kufana isiganeko enkulu Ethetha replacement Xintai, ukuba oko kwenziwe ngesantya omalunga kanye omnye okanye iinyanga ezimbalwa kule nyanga. Okwangoku akukho utshintsho izi...
Khangela isiseko umxhasi we nesendlu pa
Xa pa nesendlu iintlobo abathengi sele ngokuza evenkileni. Ngaba umntu othi ngamanye amaxesha uye kudlala, kodwa ndicinga ukuba ayikho kakhulu na ke kwisiseko umxumi, kwi pa parlour, abasetyhini basol...
Wena ke, ndaya elibe fans, ndicinga ukuba ukhetha umdlalo imifuziselo khangela kuyo yonke evenkileni kuqala. Ngoko ke, ukuba uzama ukufumana na, nokuba kufuneka adlale ngayo nayiphi na imifanekiso, ii...
Wena ke, ukuba siqinisekisa ukuba hit enkulu pa ngaphakathi, ndicinga ukuba inkoliso abo wamxabela ngaphandle ukucinga kakhulu. umatshini pa, nto leyo ke efakiweyo elibe pa kukuthi, lotto jackpot kwi ...
Wena ke, xa ishishini e-mail, elibe pa, okanye isiqulatho efanayo ngalo lonke ixesha, mna ndicinga ukuba ingaba ezininzi ufumana umyalezo ezixhamla ukuba akukho iluncedo kakhulu. Kwi pa parlour, ethet...
Xa nesendlu pa, iye uthumele ishishini ye-imeyile ngale mini njengoko imisebenzi yokusebenza. E-mail lelona, ??kusasa evulekileyo phambi sasemini, baba baninzi o parlour ukuthumela ngokuhlwa nasebusuk...
Okanye kusetyenziswe ufakelo of pa parlour udla Xintai, okanye rhoqo itafile kusetyenziswa
Lonke kukho ezininzi elibe pa, kodwa Xintai kunye neevenkile iivenkile kunye netafile ezisetyenziswayo embindini usembindini, kukho iindidi ngeendidi nesendlu pa. Iimpawu oomatshini abatsha amaninzi, ...
Ekubeni elibe pa kwakhona yinkampani yorhwebo, hayi iivenkile oyinyaniso nje iphumelele abathengi. Ngoko ke, ezinye amashishini ngokunjalo, siya zisebenza kunye nomgaqo-nkqubo ngamnye ivenkile ukuthen...
Pa onendawo imeko yokudlala kwaye lokukhuthazwa losuku lweveki holiday
Kwi pa parlour, iza kwahlulwa ibe kwisitora ukubonisa ezixhasayo ukuya kwiivenkile kunye veki ukubonisa ezixhasayo evekini. In nesendlu pa efanayo, kutheni kukho umahluko onjalo ephuma, siza kujonga u...
Pa parlour ukutyala izixhobo neyilahleko kunzima ekunciphiseni ukuba umthengi
Qwalasela phawu-mkhwa pa parlour [Horukon Set Operations]
Xa abaninzi abantu baya kudlala elibe pa, ndiyacinga ukuba ukukhangela data kwi isibane data. Ukuba ngaba ujonge data, apho eqongeni koko uhlobo yokumpompoza, angazi kunyuke nge. isibane kwedatha ulwa...
Hit lwalunjani, ayeke phakathi ithemba noloyiko kwaye hit kakuhle, ndicinga ukuba pa mnandi ngokwenene. Noko ke, xa itulo na, ukuba ezinye izinto leswaku Chang, xa musa hit na ukubetha yonke, kusenoku...
Qwalasela phawu-mkhwa pa parlour [uhlengahlengiso isikhonkwane kunye nezikhonkwane ISityhi Mhl.]
Xa kudla baya kudlala elibe pa, ndicinga ukuba siza kubona injongo yokuqala yaba ngulowo imodeli ngamnye. Ngoko ke, lo ngowona uhlengahlengiso isikhonkwane, ukuba ndifuna ukuqinisekisa. uhlengahlengis...
Lo matshini pa, usoloko imvelaphi inyuselwa ROM. Ngoko ke, yintoni uhlobo lwento nokuba ROM, Ndingathanda ukuthatha jonga kwi esebenza ngayo. Ngenxa ROM kukuba, okanye imisele jackpot, leyo iqulathe i...
Pa onendawo ngexesha isiganeko kubonakala ukuba ngakumbi kumfanekiso yempikiswano, kodwa akukho nto enjalo. Soloko itheyibhile alulame kude ngexesha lo mcimbi ngoku. Kakade ke, ekubeni eliphethwe ekup...
pa Old kukuba, abanye abantu ukuba yokudlala esihle lula nokuba ngaphandle kangaka-mali. Pa ezisanda, ukungcakaza womelele kakhulu, ilungele ukuba zinyamalale kwimizuzu ngaphantsi kwe-30 10,000 yen.ku...
Igama elithi pa soqwalaselo qela, ngokuqhelekileyo ngokuqhelekileyo ukuze amagama angaqhelekanga Ukuba kuwe pa fun, awufuni ukufumana uncedo lwakho, kodwa wathi yoqwalaselo qela ngokwayo okunene. Ekub...
Ukumisela iivenkile ezigqwesileyo pa onendawo iziganeko
Loluphi uhlobo shop pa okanye isincomo ukwenza lo mcimbi, siya kujonga ukuba pick it apho uzimisele.■ isiganeko ngenyanga enye uphawuKuqala kwinto zonke, kuba elibe pa, ayeba isiganeko uphawu kanye ng...
In nesendlu pa, umashini pa yimveliso. Lilungiselelo pa zegumbi onobuhle, ngokubhekiselele amanye amashishini, kuya kuba njalo njengoko uyawubonakalisa iimpahla. Kwi pa parlour, shima ufuna ukuthatha ...
Ukuphonononga kwi lula umzekelo imeko kububeka zegumbi pa kwemikhosi
Xa nesendlu pa, iyavela imveliso ngendlela efanayo namanye amashishini, oko kukuthi, kukho umfuziselo esicetyiswayo. Indlela iza kwenza izindululo imodeli eyahlukileyo nganye zegumbi elo liphezulu pa,...
Ukuqala kwenyanga - sisiqalo pa parlour lo msebenzi (sokubuyisa ixesha ekuphulukenwe okanye open-life)
※ Ukuba sele nje baqhele ukuya njenge trend kufunelwa ushishino lonke ukukholisapa onendawo kuthethwa, kodwa musa uqaphele, kwi pa egumbini, kwaye, apho kuya kubakho ixesha yaye kulula umdlalo kunye n...
Ukuze ubone ukuba ingaba umzekelo lokuphumelela ukusuka kumatshini pa imo yokusebenza
Iimfaniso baduma e pa, akukho modeli. Kucacile, kodwa ixesha elininzi abathengi ukuba imodeli lokuhlala Popular. Ngoko ke, kamsinya nje buqapheleke engena ivenkile pa, ndicinga ukuba Kakade imodeli um...
Ukuze umntu kuni o, ndicinga ukuba abanye abantu, nto leyo eza ifundwe lowu pa le. Kwiminyaka yakutshanje, hayi kuphela phephancwadi kuhlawulwa, iphepha free, njl ngokusebenzisana siganeko kwakhona iy...
Kukho indawo pa ukuba isiza data Lobo Seven. Ngendlela efanayo P-WORLD of site lolwazi kwezoshishino, ungabona ezifana ekhangela iinkcukacha umfuziselo iholo pa, iintlobo ulwazi. E, kodwa kunokuba uci...
Ulungile pa, ndicinga ezininzi labantu abasebenzisa p-ihlabathi. A site free, ukuze nabani na zingajongwa ngokulula, kuba kukuqokelela iinkcukacha iye site ufunwayo.In p-ihlabathi, ukuba khosi ulwazi ...
Umahluko-nkqubo zoshishino ngenxa indawo pa parlour (Agents Station & kwiivenkile ipoma)
Nawuphi na ivenkile, ndicinga ukuba ukwenza ushishino izixhobo ezahlukeneyo iimeko site. Pa kungekho ngaphandle, siba amanyathelo ahlukeneyo kwaye ezahlukeneyo, ishishini kunye nokwenziwa ngokwabo umf...
umsebenzi oqhelekileyo ngexesha kweqonga lokukhetha elibe pa
Khangela ukuqinisekisa ukushiya iqonga na ibali engenakwenzeka, kodwa, ukuze kuthintelwe utyalo nekukudlala ngemali, iinkcukacha kunye nezikhonkwane na indawo ofuna ukubona. Ngo, kule theyibhile ukukh...
Wina Indlela Hanemono-Dejihane (concepts esisiseko)
pa yakutshanje, ekubeni umatshini Seven sele isifundo, ndicinga ukuba ukungena kwanabo musa ukwazi oko kuthiwa Hanemono. Abanye abantu abakwaziyo, Hanemono ukuba intlawulo ngaphantsi, inokuba abanye a...
Uqwalaselo qela, ekhawulelana umqondiso jackpot ukusuka uqwalaselo iHolo ukuze iqela ngalinye liya kuba lowo bazicima jackpot. IsiCwangciso-qhinga kweholo conserver capture, into eye kwinethiwekhi wac...